Martinique: Ny fitsangatsanganana any Karaiba frantsay tonga any Las Vegas
Home » Toerana fitsangatsanganana » Martinique: Ny fitsangatsanganana any Karaiba frantsay tonga any Las Vegas
Ny Nosy Karaiba frantsay any Martinique dia hanatrika indray ny DEMA SHOW fanao isan-taona, izay atao amin'ity taona ity any Las Vegas ny 14 hatramin'ny 17 novambra 2018.
Ny DEMA Show fanao isan-taona, hetsika lehibe indrindra eto an-tany ho an'ny asa fisitrahana scuba, fanatanjahan-tena amin'ny ranomasina ary orinasam-pitaterana an-dranomasina / misitrika dia mahasarika fampirantiana an-jatony ary matihanina amin'ny indostrialy antsitrika sy fitsangatsanganana an'arivony manerana izao tontolo izao.
Ny manampahefana misahana ny fizahan-tany Martinique (booth double # 612) dia hanolotra ny fahasamihafan'ny tontolon'ny rano ao anatiny miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny sehatra tsy miankina toa an'i ABC Dive, Espace Plongée Martinique ary Natiyabel.
Raha te hahalala bebe kokoa momba an'i Martinique sy ny sehatry ny antsitrika dia seminera roa 45 minitra no kasaina amin'ny mitataovovonana ho an'ny mpiasan'ny dia ny Alarobia 14 Novambra (efitrano N240) & Alakamisy 15 Novambra (efitrano N239).
Ireo mpizahatany amin'ny sokajin-taona rehetra sy ny fahaiza-manao dia hahita fahasambarana marina amin'ny rano mangarahara ao Martinique amin'ny fizahana ny fahasamihafana eo amin'ny tontolon'ny rano sy ireo vatoharan-dranomasina maroloko.
Ho fanampin'ireny fananana voajanahary sy toerana fisitrihana 22 mahery ireny, ny nosy dia tsy manana tsy fahampiana kalitao sy fotodrafitrasa antsitrika matihanina voamarina, vonona hanatsara ny traikefan'ny mpitsidika amin'ny toerana azo antoka.
"Feno zava-baovao arkeolojika sy zavakanto sy zavamaniry mahavariana, Martinique dia paradisa ho an'ny mpanamory", hoy i Karine Mousseau, kaomisarian'ny fizahan-tany Martinique. "Izany no antony hanatrehana ny DEMA Show miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka eo an-toerana dia fotoana mety hanehoana ny nosy ho toy ny tanjona antsitrika tanteraka any Karaiba frantsay."
Ho an'ny aficionados antsitrika, Caradonna Adventures dia manolotra programa manam-pahaizana sy vaovao mandritra ny fito alina mihoatra ny 20 amin'ireo tranonkala tsara indrindra an'ny Martinique, ao anatin'izany ny sakafo maraina isan'andro, ny famindrana seranam-piaramanidina ary ny antsitrika dimy andro.
Fitsangatsanganana Thanksgiving: Andro farany manidina indrindra ireo
Fampisehoana fiaramanidina vaovao vaovao any Dubai